रिजनल हस्पिटलको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न - Parichaya.com
रिजनल हस्पिटलको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
हस्पिटलमा थप सेवा विस्तार गरिने
By परिचय	 On १७ माघ २०७७, शनिबार २०:५९ 0
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ जिरो किलोमिटर स्थित रिजनल हस्पिटल प्रालिको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म भएका कार्य विवरण तथा भावि योजना सहित शनिबार हस्पिटलको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।
सभाको उद्घाटन पश्चात हस्पिटलका अध्यक्ष डा. जगत बहादुर खड्काले सेवाग्राहीलाई सुलभ दरमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेकाले हस्पिटलले सेवाग्राहीको मन जितेको बताए । हाल ५० शैयाद्वार सेवा दिईरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष खड्काले अस्पतालको सेवा विस्तार गर्दै ५० शैया थप गरि १ सय शैया बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढार्ईएको जानकारी दिए । साथै सेवाग्राहीबाट लिईने टिकटको मुल्य अझ सुलभ बनाउने तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
जुवाको खालबाट लेखापाल पक्राउ
खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार प्राथमिकतामा राखेको छु : मुख्यमन्त्री गुरुङ